दमकमा भदौ २० गतेसम्म लकडाउन थपियो। | रेडियो झापा 100.7 MHz.
दमकमा भदौ २० गतेसम्म लकडाउन थपियो।
रेडियो झापा 100.7 MHz. शुक्रबार, भाद्र १२, २०७७ १८:५८:०१
१२ भदौ,दमक/ दमक नगरपालिकाको आज बसेको कार्यपालिकाको बैठकले दमकमा लक डाउन थपने निर्णय गरेको हो। आउदो भदौ २० सम्म निषेधाज्ञा जारी गर्न दमक नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई सिफारिस गरेको छ।
दमकले थपेको लकडाउनमा के गर्ने पाइन्छ र के गर्न पाइदैन तल पढ्नुहोस:
* निषेधाज्ञा मिति २०७७ साल भदौ १४ गते विहान ६:०० बजे देखि मिति २०७७ भदौ २० गते शनिवार राती १२:०० बजे सम्म ७ दिन कायम रहने छ ।
*दैनिक उपभोग्य सामाग्री खरिद बिक्री गर्नका लागि पसल, व्यवसायहरु बिहान ७:०० बजे देखि दिउँसो १२:०० बजे सम्म मात्र खुल्ला गर्न पाईने छ ।
* दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद बिक्रीका लागि तोकिएको समयमा व्यापारी, व्यवसायले भौतिक दुरी कायम हुने र स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । भिडभाड हुने गरी व्यापार, व्यवसाय गर्न पाइने छैन ।
*औषधी पसल खुल्लै रहने छन् ।
* अस्पतालहरुमा आत्यवश्यक सेवाहरु बाहेकका अन्य सेवाहरु संचालन गर्न पाईने छैन । सबै उपचार क्लिनिकहरु बन्द गर्नु पर्नेछ ।
*दमक-६ स्थीत नयाँ सब्जी बजार पूर्ण रुपले बन्द रहने छ ।
* सडक वा अन्य कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको व्यापार, व्यवसाय गर्न पाईने छैन ।
*अति आवश्यक काम नपरी घरबाहिर निस्किन र हिँडडुल गर्न पाईने छैन । अति आवश्यक कामका लागि घरबाहिर निस्किदा पनि १ जना व्यक्ति मात्र निस्किनु पर्नेछ ।
*लोकमार्गमा चल्ने अनुमति प्राप्त सवारी साधन बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारका सवारी साधन चल्न पाउने छैनन् ।
* स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सरकारी नम्बर प्लेट भएका सवारी साधन बाहेक अरु सवारी साधन चलाउन निषेध गरिएको छ । अति आवश्यक काम परी नगरपालिका क्षेत्र भित्र सवारी साधन चलाउनु परेमा नगरपालिकाको अनुमति लिनु पर्नेछ । अत्यावश्यक कामका लागि कार्यालय जानुपर्ने कर्मचारीले परिचय पत्र लगाएर मात्र आफ्नो सवारी साधन चलाउन पाउने छन् ।
* होटल व्यवसाय संचालन गर्न पाईने छैन तर क्वारेन्टिन वा आईसोलेसनको रुपमा अनुमति प्राप्त गरेका होटलहरु संचालन हुन सक्नेछन् ।
* निर्माण कार्य तथा उद्योग, कलकारखानाको हकमा कामदारलाई कार्य स्थल भित्रै सुरक्षित रुपले राख्ने व्यवस्था गरी कार्य गराउन सकिने छ । क्वारेन्टिन तथा आईसोलेसन निर्माण बाहेकका अन्य निर्माण कार्यहरु बन्द रहने छन् ।
*कुनै पनि प्रकारका भेला, सभा, जुलुस, जात्रा, महोत्सव, पर्वमा मानिस भेला भै भिडभाड गर्न पाईने छैन ।
*अत्यावश्यक सेवा बाहेक सरकारी कार्यालयबाट प्रदान गरिने अन्य सेवा र कार्यहरु स्थगित रहने छन ।
*अत्यावश्क सेवामा खटिने बाहेक अन्य कर्मचारीहरुलाई घरमै बसी गर्न सकिने कार्यहरु गर्ने गरी Work From Home खटाईने छ ।
*मृत्यु संस्कारमा जादा २५ जना भन्दा बढी मलामी लान पाईने छैन ।
*बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको कार्य संचालनका लागि समय निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा नगरपालिकाले आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ ।
*सैलुन, ब्यूटी पार्लर, मसाज पार्लर तथा पार्टी प्यालेसहरु पूर्ण रुपले बन्द रहने छन् ।
*दैनिक उपभोग्य सामाग्री ढुवानी गर्ने सवारी साधनहरुले ६:०० बजे देखि ९:०० बजे सम्म मात्र लोड अनलोड गर्न पाउने छन् ।
*निषेधाज्ञा जारी भएको क्षेत्रमा प्रहरी, प्रशासन र नगरपालिकाबाट नियमित रुपले अनुगमन हुने छ । अनुगमनका कममा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरेको पाईएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरिने छ ।